Horudhac: Sheffield United vs Liverpool… (Xiddig muhiim ah oo usoo laabanaya Reds ciyaarta ay caawa martida yihiin) – Gool FM
Haaruun February 28, 2021
(Sheffield) 28 Feb 2021. Naadiga Liverpool oo xilli adag qaadaneysa ayaa marti u noqoneysa kooxda ugu hooseysa horyaalka ee Sheffield United ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League.
Sheffield ayaa ku jirta booska 20-aad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska, waxayna uruursatay kaliya 11 dhibcood, iyadoo saadaashu ay u badan tahay inay u laabato horyaalka heerka labaad ee dalkaas.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 10:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Jayden Bogle iyo Chris Basham ayaa ku biiray liiska dhaawacyada kooxda Sheffield United ee ciyaartan seegaya.
Labada xiddig oo la filayo inay toddobaadyo garoommada ka maqnaadaan ayaa diiwaanka dhaawacyada kula biiray John Egan, Jack O’Connell, Sander Berge, Jack Robinson iyo Lys Mousset.
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ciyaartan seegaya kaasoo garoommada ka maqnaan doona ilaa bisha April kaddib qaliin looga sameeyay gumaarka.
Diego Jota ayaa la rajeynayaa inuu ciyaartan qayb ka noqdo isagoo kasoo kabtay dhaawicii soo gaaray bishii December ee sanadkii hore, halka ay Fabinho iyo James Milner tababarka naadiga kusoo laabteen maalintii Sabtida.
Go’aanka ciyaarsiinta Goolhaye Alisson Becker ayuu qaadan Jurgen Klopp saacada soo socda kaddib geeridii ku timid goolhayahan aabbihii.
Liverpool ayaa adkaatay dhammaan afartii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay labadan koox wada ciyaareen.
Sheffield United ayaa qarka u saaran inay guuldarreysato markii ugu horreysay labo kulan oo xiriir ah oo ay garoonkeeda ku marti qaadday Reds kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska tan iyo xilli ciyaareedyadii 1920-21 iyo 1921-22.
Sheffield ayaanan garaacin Liverpool kulan ka tirsan horyaalka tan iyo 1994 xilligaas oo ay guul 2-1 ah kusoo gaartay Anfield.
Sheffield United ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay taariikhda horyaalka Ingiriiska ee guul darro la kulantay 20 ka mid ah 25-ka kulan ee ugu horreeya horyaalka.
Kooxda lagu naaneyso The Blades ayaa 14 ka mid ah 20-kaas kulan lagu garaacay farqi hal gool ah.
Chris Wilder kooxdiisa ayaa la garaacay sagaal ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxaha ku jira lix kaalin ee ugu sarreeya horyaalka.
Sheffield ayaa shabaqeeda ilaashatay kaliya hal kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan oo idil.
Liverpool ayaa halis ugu jirta inay la kulanto shan guuldarro oo xiriir ah horyaalka Ingiriiska markii ugu horreysay tan iyo September 1953.
Reds ayaa la garaacay lix jeer inta lagu gudo jiro sanadkan 2021, waxayna guuldarrooyinka ay la kulantay ka badan yihiin isku darka guuldarrooyinkii ay la kulantay isku darka 2019 iyo 2020.
Kooxda uu hoggaamiyo Jurgen Klopp ayaanan shabaqeeda gool ka difaacan toddobadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay bannaanka kusoo ciyaartay, waxaana laga dhaliyay muddadaas 13 gool.
Liverpool ayaa u jirta labo gool inay dhaliso 7,000 (toddobo kun) oo gool taariikhda horyaalka Ingiriiska, waxaana darajadaas horay u gaaray kaliya Everton.
Horudhac: Chelsea vs Manchester United... (Xiddigaha maqan, xaqiiqooyinka u gaarka ah kulankan iyo wax walba oo aad uga baahan tahay ciyaarta ugu weyn toddobaadkan EPL-ka)